Japana: Momba ny Solon’Anarana Malaza An-tserasera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Septambra 2011 4:30 GMT
Niteraka adihevitra momba ny fiafenana anarana an'aterineto ny fikatonan'ny “Diary of an ex-NEET who works overseas” (Diarin'ilay NEET niasa ampitan-dranomasina) tampoka. (Ny NEET dia ilazana ny olona tsy ao amin'ny fanabeazana, asa na fanazarana.)
Amin'ny alalan'ny solon'anarana “Overseas NEET” na “NEET ampitan-dranomasina” no itsikeran'ny mpamaham-bolongana mandavataona ny etika fomba fiasan'ny Japoney sy ny foto-pisainana iraisana milaza fa ny asa hatrany no tokony ho voalohan-daharana miohatra amin'ny zavatra hafa rehetra amin'ny fiainana andavanandro. Tsy nanana asa maharitra ny tenany tany Japana noho ny fankahalany ny tontolon'ny asa any. Rehefa niampita an-dranomasina ny tenany dia nahita asa tamina orinasa vahiny iray ary nahafa-po azy ny fomba fiasa tao. Nanintona olona maro izay tsy mahazoazo aina loatra amin'ny fihetsika ifaneken'ny besinimaro manoloana ny asa ny bolongany izay manana lohateny kely manao hoe “Diky ilay Asa”. Betsaka ihany koa ny fanehoan-kevitra mameno azy.
Nahazo izao haftra manaraka izao ny olona nanomboka ny faha-7 ny volana Aogositra:
Filazana: Niteraka trangan-javatra izay mety hampidi-doza ny tenako ny bolongako, noho izany dia nanapa-kevitra aho ny hanakatona azy. Miala tsiny aho ho an'ireo izay te-hahita lahatsoratra vaovao. Efa novonoiko avokoa ny votoaty rehetra.
Saripika mpisera Flickr Miguel Michán
Tamin'ny fandrenesana ny vaovao i @twt_user nanatsoaka andalana iray tao amin'ny bolongana:
@twt_user: Nanova ny fomba fijeriko ny asa i “Overseas NEET”. Malahelo aho tamin'ny nandrenesana ny fanakatonana. Ho tsaroako hatrany ity andalana iray ity: “Raha miasa ianao satria miankina amin'io asa io ny fiainanao dia ho faty tokoa ianao. Aza manao an'io.”
Ho an'i @menchikatsu2010, nahatonga azy hiala tamin'ny asany ilay bolongana:
@menchikatsu2010: Namaky ny bolongany isan'andro tao amin'ny birao aho ary dia nandao ny asako aho. Nanova tanteraka ny fomba fijeriko izy io ary maro ny olona tiako hamaky izay voasoratra ao. Voakapoka indray ny fantsika mihoatra ny lohany… izay moa ilay izy?
@terrakei:Nakatona ny bolongan'i Overseas NEET. Matetika mitsikera ny fomba fiasa Japoney sy ny rafi-piaraha-monina ny mpamaham-bolongana manoratra momba ny asa ampitan-dranomasina. Mitady ho betsaka ny mpankahala azy ireo.
Rehefa hoe hanova ny fomba fisainan'ny Japoney no tanjon'ny bolongana dia tsy azo ialana ny resaka fampifandraisana ny fanakatonana sy ny fomban'ny Japoney mikombokombona. Miaiky amin'ny fahasarotan'ny fidifiana ny tsindry mitambesatra i @nasu_tea:
Nakatona ny bolongany ary nofafana ihany koa ny kaonty Twitter-ny. Tsy mahalala ny antsipiriany aho, saingy maminavina aho fa na dia efa mandositra mankany amin'ny firenena vahiny aza ianao dia tsy tafala amin'ny farangon'ny “ozona maha-Japoney” afa-tsy hoe tapahinao tarangana angaha ny fifandraisana rehetra. Eritreritra mahakivy.
Saripika mpisera Flickr JanneM
Momba Ny Tsy Filazana Anarana
Gaga amin'ny fanakatonana ny mpamaky, izay tsy nisy fampilazana mialoha, ary maminavina izay mety ho antony:
@mae_htmsr: Ny hafatra farany nataony, “Nakatoko ny bolongako fa mahatsapa fisiana fandrahonana ara-batana aho.” Manontany tena aho raha mitady ny hikasi-tanana azy ny tia tafahoatra ny “fiasana”. Mahatsiaro ny raharaha HAL aho izay namaham-bolongana amin'ny maha-vao nahazo diplaoma miasa any Slovakia azy, izay nisiokantsera indray maka hoe “Niantso ny tany amin'ny Masoivoho ny mpankahala iray hamotopototra ny mombamomba ahy.”
Navoitran'i @d_sapi ny ahiahiny amin'ny fahafahan'ny Japoney miafina tsy mitonona anarana rehefa any ivelany:
@d_sapi: Izay rehetra miasa any ampitan-dranomasina dia tsy tokony hiteny ny firenena misy azy. Hevero hoe iray alina ny isan'ny Japoney miaina ao amin'ilay firenena vahiny. Amin'izay fotoana izay dia miala avy any amin'ny zato tapitrisa, isan'ny mponina any Japana, mankany amin'ny iray alina ny isan'ny olona itadiavana azy. Amin'izany iray alina izany dia zato no mety manana asa. Koa satria maro no miasa amin'ny orinasa lehibe na iraisampirenena dia tsy sarotra ny mitady hoe iza ilay orinasa. Ampio amin'izany ny fahafantarana ny mahalahy na vavy azy sy ny fototr'asany fa tonga dia misy anarana mivoaka avy any. Mitandrema ihany azafady.
@d_sapi: Azon'ny hovitra aho raha namaky ity resadresaka ity: Nisiokantsera ilay mponina any ivelany iray hoe “ ** degre androany”, ary dia manontany izay mihatra aminy ny olona, miteny hoe “Afaka mamantatra azy amin'ny alalan'ny toetr'andro any Eoropa aho. Paris io, tsy izany ve?” Angamba milalao fotsiny ry zareo saingy mba ratsy izany fihetsika izany!
Misy ny olona sasany no mieritreritra fa tokony hanohy ny famahanam-bolongana hatrany ny mpanoratra raha tena tiany hoporofoina fa mendrika hohenoina ny heviny. @shi3z_bot misedra ny haja maha-mpieritreritra malalaka (afaka) azy:
@shi3z_bot: izy ilay lehilahy manindrahindra ny asa ampitan-dranomasina raha ataon'ny mpiasa manaja ny asany any Japana fanalan'andro ny lahatsorany miverimberina. Eritreretiko ho mora noho izany ny mamantatra ny tena anarany sy ny orinasa iasany. Ny fanakatonana dia midika fa tsy nahazoany fahafaha-mieritreritra ny nivoahany nakany ivelany.
@TakahashiMasaki mampiakatra ny volomasony mahita azy katahotra:
Izany ilay mandondòna ny fihetseham-pon'olona amin'ny fehezanteny tahaka ny “Miala ny orinasa mpanandevo” sy “Ambany ny Japoney”. Ary dia nakatony ny bolongany satria nisy nivoaka ny mombamomba azy? Rainitetaka!
@Ni_nja milaza fomba fijery hafa:
Mieritreritra aho fa nanohy namaham-bolongana i “Overseas NEET” raha tsy nanambady. Fa efa manambady izy izao – efa nanoratra ny momba ny fanambadiany iraisampirenena izy indraindray, tadidy? Raha nahatezitra ny hafa ny teniny, ka mety miantraika any amin'ny olo-tiany izany, mazava loatra fa hitsoaka izy. Tsy afaka miady amin'ny olona tsy hitanao maso ianao.